China Forged Wheel/Forging Wheel Manufacture uye Fekitori |Hanvos
1.Tine mainjiniya akawanda ane makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo uye anogona kuita 3D & 2D dhizaini uye Test simulation pakombuta kuti tive nechokwadi chekuti mavhiri anogona kusvika pachiyero chisati chavhurika molds.
2.Tine yakanakisa QC timu iyo nhengo dzine makore anopfuura gumi echiitiko uye dzinogona kuita chinyorwa chekutanga sampling & cerification test, ongororo yekugadzira & kuongororwa kwehutongi hwemhando panguva yekugadzira pamwe nekuenderera mberi kwekuvandudza chirongwa.
3.Tine boka rebasa rehana rine nhengo dzine makore anopfuura 8 ane ruzivo.Ivo vanozotevera maodha kuita chokwadi nekukurumidza kutumirwa uye nekukurumidza kupindura kune vatengi mameseji.Zvakare, ivo vanozopa iyo yekurongeka yekugadzirwa kwemutengi svondo rega rega.
Isu tinozvishandisa pakugovera emhando yepamusoro mavhiri pamusika nhasi uye tinopa sevhisi yedu yakanaka kune vatengi vedu.Uye zvigadzirwa zvedu zvinovimbiswa kusvika kune mwero.
· Chengetedzo - AIl mavhiri anopfuura anodiwa ekuchengetedza bvunzo uye anosangana kana kutopfuura mazinga epamusoro.
· Zvikamu - Zvese zvakatsanangurwa senge bhaudhi pateni, hupamhi, yepakati bore uye offset inofananidzwa chaizvo.
· Hunhu - Mugadziri wedu anga ari wemhando yakasimbiswa neIS09001, TS16949 uye akabuda semumwe wevanotungamira vagadziri vealuminium alloy mavhiri muindasitiri yemavhiri nhasi.
PEDZERA KUGADZIRIRWA KWECHIgadzirwa, KUSVIRA UYE KUSVIKA KWENGUVA
TRACKING QUALITY PANGUVA YEKUGADZIRA PROCESS
100% QC ONGORORA MAERERANO NEKAMUSORO CHEKUKURUDZA ZVINHU ZVINHU ZVISATI KUTAMBIRA
Q1.Zvakadini nenguva yako yekutumira?
A: Iyo yakatarwa nguva yekuendesa zvinoenderana nezvinhu uye huwandu hweodha yako.
Zvekurongeka kwekugadzira: kazhinji zvinotora mazuva makumi matatu kusvika makumi mana nemashanu mushure mekugamuchira muripo wako wepamberi.
Q2.Ndinogona kutenga imwe seti yemavhiri emotokari yangu kana kutengesa zvakare?
A: Tinogona kutengesa imwe seti yemavhiri kwauri chero isu tine mustock.Ndokumbira utumire mameseji neruzivo rwunodiwa nezve modhi, saizi, PCD, kupedzisa, uye kana uine wako wekutumira kuti akubatsire kutumira mavhiri.
Q3.Ndeupi mutemo wako wemuenzaniso?
A: Tinogona kupa sampuli kana tiine zvinhu mustock, asi vatengi vanofanirwa kubhadhara sample mutengo uye courier inodhura ivo pachavo.
Tiudze muenzaniso waunoda uye isu tichatarisa stock yedu.
Q4.Unoyedza zvinhu zvako zvese usati wazvitakura here?
A: Hongu, tine 3 nguva 100% bvunzo isati yasvika.
Zvakapfuura: Chiedza Weight Aluminium Wheel, Chiedza Wheel, Chiedza Aliminium Wheel
Zvinotevera: Yakagadzirirwa Forged Simbi Wheel ine Precision Machining
Yakagadzirirwa Forged Aluminium Alloy Wheels for Off...
Gadzirisa High Quality Factory Forged 18-24Inch...